डा. लुना भट्ट शर्मा
२०७८ बैशाख २७ सोमबार १०:०४:००
भ्याक्सिनप्रति अति विश्वास हुने वा भ्याक्सिन केही पनि हैन भनेर अति निराश हुनेलाई के सन्देश दिनुहुन्छ ?
अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै रोगप्रतिरोधी क्षमता दिनेचाहिँ दादुराविरुद्धको खोप हो । मैले त्यसैमा विद्यावारिधि गरेको हो । कोभिडको खोप आपत्कालीन अवस्थामा विकास गरिएको हो । अनुसन्धानदेखि उत्पादनसम्म एक वर्षभित्रै भयो । खोप प्रभावकारी हुने तरिका फरक–फरक हुन्छ । कतिपय कुरा ट्रायल गर्दागर्दै सिक्दै छन् ।
अस्ट्राजेनेका खोप बनाउने क्रममा सुरुमा आधा डोज दिइयो, एक महिनापछि पूरै डोज । त्यसको ‘इम्युन रेस्पोन्स’ राम्रो देखियो । कोरोना भाइरस हरेक वर्ष आइरहने भाइरस हो । वास्तै नगरेको भाइरस, आउँथ्यो–जान्थ्यो । इबोला पनि त्यस्तै वास्ता नगरिएको भाइरसले ल्याएको हो । यसैले धेरै अध्ययन भएन, औषधि पनि थिएन । भ्याक्सिन त झन् सोच्दै सोचिएन । सार्सको संकटमा थोरै थाहा भयो । तर, सार्स थोरै देशमा फैलिएको थियो, नियन्त्रणमा आइहाल्यो । मर्स आयो, त्यो पनि खास–खास क्षेत्रमा मात्रै देखियो, नियन्त्रण भयो । यसबारे ठोस ज्ञान थिएन ।
‘इम्युन रेस्पोन्स’ कस्तो हुन्छ भन्ने पनि थाहा थिएन । पुनः संक्रमण हुन्छ कि हुँदैन, थाहा थिएन । मौसमी कोरोना भाइरसमा पुनः संक्रमण भए पनि सार्स, कोभिडमा हुन्छ कि हुँदैन, थाहा थिएन । खोप त आयो, तर यसले कति समयसम्म रक्षा गर्छ, थाहा छैन । हरेक दिन अध्ययन/अनुसन्धानका नतिजा आइरहेका छन् । खोपले कति र कसरी काम गर्छ भन्नेमा हामी सिक्ने चरणमै छौँ । अनन्त कालका लागि नभए पनि, पुनः संक्रमण हुने भए पनि हामीले खोप लगाउनुपर्छ । पहिले खोप १८ वर्षमाथिकालाई मात्रै थियो । अहिले १८ वर्षमुनिकालाई पनि ट्रायल भइरहेको छ ।
यहाँ दोस्रो डोज लगाएपछि संक्रमित भएका केसहरू सुनिए । यो भ्याक्सिनको कारणले हैन है । पहिलो डोज लगाउने चरणमा दोस्रो लहरले कहरको रूप लिइसकेको थिएन । दोस्रो डोज लगाउने वेलामा त दोस्रो लहरको कहर सुरु भइसकेको थियो, खोप केन्द्रमा भीडभाड पनि धेरै भयो । भीडभाड, अव्यवस्थाको कारण खोप केन्द्रबाटै धेरैले भाइरस लिएर घर फर्किएको अनुमान गर्न सकिन्छ । दोस्रो डोज लिएको चार–पाँच दिनमा लक्षण देखिएको सुनिएको छ । खोप लगाएपछि पूरै सुरक्षित भइयो भन्ने पनि धेरैलाई लाग्यो । खोप औषधि हैन, शरीरमा अब हुने संक्रमणसँग लड्न बलियो पार्ने मात्रै हो । त्यो पनि निश्चित समय मात्रै । खोप लगाएका व्यक्ति संक्रमित हुन सक्छन्, तर गम्भीर बिरामी हुने सम्भावना कम छ ।
तपाईं त भाइरोलोजिस्ट, भाइरसका भेरियन्टबारे भन्दिनुहुन्छ कि ?
भेरयिन्टहरू थरीथरीका छन् । युके भेरियन्ट सुरुमै देखिएको हो, अत्यन्त संक्रमणशील छ । ब्राजिल भेरियन्ट यहाँ आएको छैन । साउथ अफ्रिकन भेरियन्ट पनि छ । अहिले इन्डियन भेरियन्ट चलिरहेको छ । भारतमा पनि साउथमा एउटा, पन्जाबमा अर्को, पश्चिम बंगालतिर अर्को खालको भेरियन्ट फैलियो । दक्षिण भारतमा पनि पहिले एउटा र पछि अर्को भाइरस फैलियो । यसमा पुनः संक्रमण हुने धेरै केस देखिए । नयाँ चरणमा भाइरसलाई फैलिन र प्रतिरोधी क्षमता दबाउन सजिलो हुन्छ । यस्तो खालको भाइरसले पुरानोलाई विस्थापित गरेर स्थापित हुन थाल्छ । यही क्रममा भारतमा डबल म्युटेन्ट देखियो । पश्चिम बंगालमा देखिएकाले रोगप्रतिरोधी क्षमतालाई नै छल्न सक्ने देखियो । अहिले भारतमा पुराना भेरियन्टहरूलाई विस्थापित गरेर नयाँ भेरियन्टहरू बढी आक्रामक देखिएका छन् ।
महामारीले आमनिराशा पैदा गरेको छ । लकडाउनमा रोजगारी गुम्नु, काम ठप्प हुनु, परिवारका सदस्य संक्रमित हुनु वा गुमाउनु, अस्पतालमा बेड नपाउनु आदिले निराशा थपिदिएको छ । आममानिसमा आशा जगाउने कसरी ?
लकडाउनले दैनिकी असामान्य बनाएकाले पनि डिप्रेसन बढाइरहेको छ । संक्रमण नियन्त्रण गर्न लकडाउनको अवधि लम्ब्याउँदै लानुपर्ने हुन सक्छ । यस्तोमा अवस्था सहज बनाउन राहत व्यवस्था गर्ने हो । राहत व्यवस्थापन गर्न मेकानिजम बनाउने हो । लकडाउनमा दैनिक ज्यालामजदुरी गरेर खाने वर्गलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्‍यो । सरकारले खोप अभियान सुरु ग¥यो, तर खोप केन्द्रबाटै कोभिड संक्रमण भइरहेका उदाहरण छन् । नियन्त्रणका प्रभावकारी कदमका साथै राहतबाटै आशा जगाउनु पर्‍यो ।
संक्रमित भइसकेका व्यक्तिले खोपको एक डोज मात्रै लगाउँदा प्रभावकारी हुन्छ ?
सामान्यतया संक्रमण भोगिसकेकामा एन्टिबडी उत्पादनको प्रक्रिया सुरु भइसकेको हुने र एक डोज खोप लगाउँदा एन्टिबडी छिटो उत्पादन हुुने भएकाले दुइटा खोप लगाएसरह हुने गर्छ । एकपछि अर्को भाइरसका अनेकन् म्युटेन्ट देखिएकाले सबैमा यही लागू हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन । यसैले महामारी अन्त्य नभएसम्म सावधानी अपनाउन आवश्यक छ |
#डा. लुना भट्ट शर्मा